Finan yaryar: 5 Dibedda Dibadda - Hagaajinta Caafimaadkaaga - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »Xasaasiyad Qallalan: 5 Dibedda Dibadda - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Finan yaryar: 5 Dibedda Dibadda - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Finanku waxay u muuqan karaan natiijada sawirro badan oo caafimaad. Qaar ka mid ah sababaha ay ka midka yihiin waxaa loola jeedaa taabashada cayayaanka ama xasaasiyad. Waxaa lagu gartaa dhibco yaryar, cuncun iyo cuncun. Sidee loo dejiyaa finanku?
Daaweynta xaaladdan way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran sababaha asaasiga ah. Si kastaba ha ahaatee, Daawooyinka jirka la mariyo sida badanka iyo kiriimyada ayaa badanaa la isticmaalaa. Laakiin waxaa jira sidoo kale daaweyn dabiici ah oo caawiya nabarka. Halkan waxaa ku qoran 5 fursadaha aad isku dayi karto guriga. Qaado!
Dib-u-hagaajinta isticmaalka dibadda si loo yareeyo finanka
Nabaro badani waa kuwo khafiif ah oo baaba'aya maalmo yar gudahood. Qaarkood ayaa markiiba ku dhacaan, laakiin kuwa kale ayaa si tartiib ah u kobcaya Si kastaba ha ahaatee, waxay aad u dhib badan yihiin, keena cuncun, gubasho iyo calaamado kale oo ka sii dari kara haddii aan la daaweyn.
Sida loo yareeyo finanku waxay ku xiran tahay inta badan cudurka oo keena. Sidaa darteed, marka la eego calaamadaha, waxa ugu wanaagsan in la tasho dhakhtar marka hore. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan loo eegin calaamadaha lagu ogaanayo, daawooyinka dabiiciga ah ayaa kaa caawin kara in ay hoos u dhigto.
1. Saliidda qumbaha
Saliidda Caanaha ku jirta ayaa ah mid ka mid ah habka ugu fiican ee guriga loogu nuujiyo finanka. ayay waxaa ku jira asiidh dufan, antioxidants, fitamiino iyo macdano kor u qaada caafimaadka maqaarka. Intaa waxaa dheer, waa qoyaan badan waxayna yareysaa falcelinta xasaasiyadda.
Hel 100% saliid dabiici ah.
Qaado qadar yar oo u adeegso maqaarka sida haddii ay ahayd kareem.
Kaddibna dhowr daqiiqo, illaa inta ay ka nuugto.
Ka tag iyada oo aanad marin oo ku celi arjiga maalinta xigta.
Sidoo kale soo celi: 3 daaweyn dabiici ah si loo yareeyo xajiinta maqaarka
Sodium bicarbonate waxay leedahay sifooyin caawinaya soo celinta pH ee maqaarka. Sababtan awgeed, waamid ka mid ah maaddooyinka ugu wanaagsan ee xasaasiyad iyo xasaasiyad. Xitaa waxay leedahay saameyn yar oo ka-horjoogsan oo hoos u dhigta xanaaqa iyo dareenka gubashada.
4 qiyaasta sodium bicarbonate (60 g)
1 / 4 koob biyo ah oo la soo saaray (62,5 ml)
Diyaarso cajiinka leh baking soda iyo biyo la dhalaaliyey.
Ka dibna codso meelaha ay dhibaatadu saameysey.
Ka tag on daqiiqo 10 ka dibna raaci biyo diirran.
Haddii ay calaamaduhu sii socdaan, ku celceli isticmaalka.
Yulmeelaha waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ujeedooyin kala duwan oo daaweynta iyo qurxinta. Thanks to saameyn xoog leh antioxidant iyo saameynta anti-bararka, waa waamid ka mid ah maaddooyinka ugu fiican si loo xasiliyo xasaasiyadda iyo calaamadaha kale ee xasaasiyadda. Xitaa waxaa loo isticmaali karaa haddii ay dhacdo gubasho ama dhaawac.
Habka koowaad : Ku shub koobka koobta biyaha kuleylka qubeyska wiqiyadaha 30.
Habka labaad : Isku qas yar yar yaryar oo leh biyo biyo leh si aad u sameyso koollo shiidan. Si toos ah u codso firiiricda oo ka baxso daqiiqado 20. Dib u cusbooneysii daaweynta 3 maalmo isku xigta ama ilaa raaxo lakulmo.
4. Chamomile saliid muhiim ah
Saliidka lagama maarmaanka ah ee chamomile, ama xitaa faleebo geedka, waxaa loo isticmaali karaa sida daweynta jirka ee firiiricda. Thanks to guryaha ay ku jiraan, waxay hoos u dhigeysaaxanaaq waxayna xawaareysaa xakabaynta boogaha cas.
Ku dar saliida lagama maarmaanka ah ee chamomile biyaha qubeyska oo qaado qubeyska daqiiqadaha 20.
Haddii aad doorbideyso, isticmaal faleebo geedeedka sida looska. U dhaaf isaga oo aan kuxineynin oo ku celi codsiga 2 hal mar maalintii.
5. Saliidda Jojoba
Saliid kale oo leh sifooyin anti-bararka oo ilaaliya caafimaadka maqaarka waa saliid jojoba ah. Waxyaabahani waxay nuugaan unugyada waxayna yareynayaan cuncun. Waxaa intaa dheer, waxay sidoo kale ka qayb qaadataa nuugista daawooyinka jirka la mariyo.
Qaado qadar yar oo saliidda jojoba ah oo ku xaji goobaha ay dhibaatadu saameysey.
Ka tag iyada oo aanad marin iyo, haddii ay lagama maarmaan tahay, ku celiso codsiga 2 hal mar maalintii.
Sidoo kale akhri: Talooyinka 5 si aad u nadiifiso maqaarkaaga
Gebogebo, si aad u yareyso finanku ....
Maaddooyin dabiici ah oo badan ayaa loo isticmaali karaa si loo xakameeyo finanka iyo raaxada. Si kastaba ha ahaatee, cilmi baaris dheeri ah ayaa loo baahan yahay si loo go'aamiyo sababta qaar ka mid ah ay waxtar u yihiin kiisas badan oo aan kuwa kale ku jirin. Si kastaba ha noqotee, codsigoodu wuxuu dardar gelin karaa xaalada xaaladdan.
Dareemaha ilmaha yaryar: sida loo daweeyo?
Caabuqyada ilmaha yaryar waa xaalado caadi ah oo maqaarku u muuqdo muuqaal bararsan. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/remedes-externes-apaiser-eruption-cutanee/
Chamomile iyo daweyno kale si ay u caawiyaan dheef - Inay hagaajiyaan caafimaadkaaga
Carlos Ghosn ayaa la sii daayay kaddib markii si adag loo xakameeyay